मलाई अहिले बच्चा चाहिएको छैन। - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
मलाई अहिले बच्चा चाहिएको छैन।
म २० वर्षीया गृहिणी हु। मेरो विवाह भएको ६ महिना भयो। मेरो महिनावारी पहिले ठीक थियो, तर पछिल्लो महिना २ पटक भयो। पछिल्लो पटक त १० दिनसम्म रक्तस्राव भयो। मैले एकपटक आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की खाएकी थिएँ। त्यसैले यस्तो भएको त होइन ? मलाई अहिले बच्चा चाहिएको छैन। मैले परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त होला ?
आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीमा प्रोजेस्ट्रोन नामक हार्मोन हुन्छ। यसमा अन्य नियमित खाने चक्कीहरूमा भन्दा उक्त हार्मोनको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसैले यो प्रभावकारी छ। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोनले महिनावारीमा विशेष प्रभाव पार्छ। तपाईंको महिनावारीमा गडबडी हुनुको कारण उक्त आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीको अनावश्यक प्रयोग पनि हुन सक्छ। यसरी आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्नुको सट्टा कन्डम वा अन्य अस्थायी साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तपाईंहरूजस्ता नवदम्पतीले आवश्यक परामर्शपछि छोटो अवधिका अस्थायी साधनहरू जस्तै खाने चक्की वा तीनमहिने सुई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
यो लेख मलाई एकदमै मन पर्‍यो ।
मलाई भएको के हो र यसको समाधान के छ ?
कोरोना : त्रास उस्तै फाल्गुन १, २०७६
गर्भावस्था : योगको समय र योग गर्नुको फाइदा माघ २८, २०७६
कोरोना भाईरस संक्रमणबाट बच्ने तरिका माघ २२, २०७६
हङकङमा बढ्दो कोरोना सन्त्रास : एक जनाको मृत्यु माघ २१, २०७६
के हो प्रोस्टेट क्यान्सर ? माघ १९, २०७६
नोबेल कोरोना महामारी कस्तो छ ? माघ १७, २०७६
कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुँदैन : नयाँ रोगहरु आउने, जाने क्रम चलिरहेको छ ! माघ १३, २०७६